သင့်ကလေးတွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းမိနိုင်တဲ့ အကြောက်တရား (၅)ခု - Chit MayMay
Home Parenting Parent Guide သင့်ကလေးတွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းမိနိုင်တဲ့ အကြောက်တရား (၅)ခု
သင့်ကလေးတွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းမိနိုင်တဲ့ အကြောက်တရား (၅)ခု
တစ်နေ့မှာ သမီးက “ဖေဖေ သီချင်းဆိုမလား? “ဆိုပြီး သူနှင့်အတူ ကာရာအိုကေသီချင်းဆိုဖို့ ကျွန်တော့်ကို စင်ပေါ်တက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ “ဟင့်အင်း ဖေဖေ၊ နေမကောင်းဘူး”လို့ လိမ်ညာမိခဲ့ပါတယ်။ ကီးကြောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အသံနဲ့ ကိုယ်မသိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဆိုဖို့ ကြိုးစားရင်း အရှက်မကွဲချင်ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်ဟာ challenge တစ်ခုကနေ ထွက်ပြေးရတာ အဆင်ပြေတယ်လို့ သမီးကို ပြောပြခဲ့မိပါတယ်။ သမီးက သူနဲ့အတူ သီချင်းဆိုဖို့ မတောင်းဆိုဖူးပါဘူး။ မိဘတွေအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ မသိလိုက်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ကလေးတွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းမိနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်ဆင့်ကမ်းနေတဲ့ အကြောက်တရား (၅)ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁။ စွန့်စားရမှာ ကြောက်တာ
ကျွန်တော် ၈နှစ်သားအရွယ်တုန်းကပေါ့။ ဆူးကြိုး ခြံစည်းရိုးများစွာလည်း တတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သစ်ပင်ပေါ်တတ်ဆော့ရင်းနဲ့လည်း သစ်ပင်ပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ကလေးတွေကို ဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ လုပ်ခွင့်ပြုဖို့ ဘယ်တော့မှ စိတ်မကူးခဲ့ပါဘူး။ ကလေးတွေဟာ သဘာဝအလျောက် စွန့်စားတတ်သူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကန့်သန့်ချက်တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ချင်ကြပါတယ်။ ကလေးအများစုက လှေကားထစ်တွေကနေ စကိတ်စီးဆင်းဖို့ နှစ်ခါမစဉ်းစားကြပါဘူး။
ကလေး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကို ဘယ်ဖေဖေမှ မမြင်ချင်ကြပေမယ့် ဟယ်ရီကော်ပတာမိဘတွေလို လုပ်မိရင်၊ သူတို့ကို ကာကွယ်ဖို့ အမြဲကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ကို ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်သလို သူတို့ရဲ့စွန့်စားမှုကလည်း ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် စွန့်စားမှုက ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေအတွက် ကြီးကျယ်တဲ့ ဆုလာဘ်တွေ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကို သိရှိသွားကြတာကြောင့်ပါ။
၂။ ကျရှုံးမှာကို ကြောက်တာ
ကျွန်တော်တို့ အနှစ်သက်ဆုံး အားကစားအဖွဲ့တွေ ရှုံးနိမ့်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေက ကြည့်နေကြပါတယ်။ အရှုံးကို မစွန့်လွတ်နိုင်ဘဲ ညံ့ဖျင်းရင် ကျရှုံးတာမကောင်းဘူးလို့ ကလေးတွေကို ပြောပြနေမိပါမယ်။ သင့်ကလေးတွေ ကျရှုံးမှာကို ကြောက်လာပြီဆိုရင် သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဆန္ဒရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Smithsonian မဂ္ဂဇင်းရဲ့အဆိုအရ သောမတ်စ်အက်ဒီဆင်ဟာ မီးသီးတီထွင်ရာမှာ ကျရှုံးတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ မေးမြန်းခံရတဲ့အခါ” ကျွန်တော်အကြိမ် 10000 မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အလုပ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်း 10000 ကိုကျွန်တော် အောင်မြင်စွာ ရှာတွေ့ခဲ့တယ်” လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ “သူအကြိမ်ကြိမ် ကျရှုံးခဲ့လို့ သူအောင်မြင်ခဲ့တာပါ” လို့ မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ကလည်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရှုံးနိမ့်ခြင်းက သင်ယူမှု ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး ပိုကောင်းလာဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျရှုံးခြင်းကို ပိုဂုဏ်ပြုရမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေဟာ ကျရှုံးမှာကို မကြောက်ဘဲ အဲဒီကနေ သင်ယူရမှာပါ။
၃။ အရှက်ကွဲမှာ ကြောက်တာ
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ ကျွန်တော်က တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် “၃၀စက္ကန့် အကပါတီ”ဆိုတဲ့ ကျပန်းစာပို့ကြပါတယ်။ ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘာပဲလုပ်နေနေ စက္ကန့် ၃၀လောက် အကလေးတစ်ခု လုပ်ရပါမယ်။ အစကတော့ ဒီလိုလုပ်ရတာ ကျွန်တော် အရမ်းရှက်ပေမယ့် ကျွန်တော်သမီးက ကျွန်တော့်ကို လိုက်ဖမ်းပြီး အတင်းလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ သမီးလေးက ဂရုတစိုက်ရှိပေးတာကြောင့် ကျွန်တော်ပျော်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အရှက်ရစေတဲ့အရာက သမီးနဲ့ ပိုရင်းနှီးစေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ကရမှာ ကြောက်တဲ့စိတ်ကို ကျော်လွှားခဲ့ပုံက သမီးလေးအား ကျောင်းက သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ သတ္တိရှိဖို့ ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်ရပါတယ်။
၄။ Perfect မဖြစ်မှာကို ကြောက်တာ
ကျွန်တော်ကလေးရဲ့ နေ့လယ်စာ ပြင်ဆင်ပုံကအစ၊ ကော်ဖီဖျော်ခြင်း (သို့) ဂီတတူရိယာ တီးခတ်ခြင်းအထိ အရာရာတိုင်းကို ပြီးပြည့်စုံနေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ် ကျွန်တော့်မှာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဝါဒကို ခံစားနေရတာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်သမီးကလည်း အဲ့လိုဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ သမီးက ဂစ်တာတီးဖို့ သင်ယူနေပေမယ့် နုတ်တစ်ခုလွတ်သွားတဲ့အခါ ဒေါသဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ သူမဟာ ပြီးပြည့်စုံအောင် မလုပ်နိုင်ရင် တီးခတ်မှုမှာ စိတ်ဝင်စားမှု ဆုံးရှုံးလာပါတယ်။ သူ့ကို ဂစ်တာတီးတတ်အောင် သင်ပေးခြင်းက ကျွန်တော့်မျက်နှာကို မှန်ထဲမှာ မြင်နေရသလိုပါပဲ။ Perfectionism ဟာရေရှည်မှာ ထူးချွန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်း ပျော်ရွှင်မှုကို ဆိတ်သုန်းစေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ သင့်ကလေးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို မပျက်စီးပါစေနဲ့ ။ အသက်ရှုတတ်အောင် သင်ပေးပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီး အရာအားလုံးကို လွှတ်လိုက်ပါ။ သင့်ဘဝက ဘယ်တော့မှ Perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ရဲ့ဘဝကို ပြီးပြည့်စုံအောင်မကြိုးစားပါနဲ့။
၅။ ပဋိပက္ခဖြစ်မှာ ကြောက်တာ
ပဋိပက္ခကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက ကိစ္စတစ်ရပ်ကို တရားဝင်လက်ခံပြီးမြောက်စေတာပါ။ သင့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ငြင်းခုံမှုတစ်ခုမှာ သင့်ကိုယ်သင် ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲဆိုတာကို သင့်ရဲ့သားက စောင့်ကြည့်နေတာပါ။ အသေးအဖွဲ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ရမှာ မတန်ဘူးထင်တဲ့အတွက် အသေးအဖွဲပြဿနာတွေကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ သင့်ကလေးတွေဆီ မက်ဆေ့ချ်ပို့နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခတွေကို ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ရှောင်ရှားဖို့ သူတို့ကို ပြောပြနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကလေးတွေ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ သူတို့နေရာအတွက် ဘယ်တော့မှ တိုက်ပွဲဝင်မှာမဟုတ်ဘဲ သူတို့ကို ပေးထားတဲ့နေရာကို လက်ခံရုံပါပဲ။ ပဋိပက္ခအများစုက ငြင်းခုံမှု (သို့) အကြမ်းဖက်မှုတွေဆီကို ဦးတည်သွားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက အများအားဖြင့် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုစိတ်ရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleဆယ်ကျော်သက်တွေ ဘာကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်ကြတာလဲ? ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်များ
Next articleကလေးတွေကို စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၃)ခု